doremi | Education, Myanmar Business | 2013年12月9日
Written by ဇေ​ယျာ​စံ
ဒီ​နေရာ​မှာ စကားစပ်​မိ​တယ်​လို့ သဘောထား​ပြီး ပုစ္ဆာ​ကလေး​တစ်​ပုဒ် လောက် တွက်​ကြည့်​ရအောင်​လား ဗျာ။
ပေး​ချက်..ကျွန်တော်​တို့​သင်​တန်း တွေ​မျိုး​စုံ တက်​ခဲ့​ကြ​ပါ​တယ်။
သက်သေပြ​ချက် … ကွန်ပျူတာ သင်​တန်း၊ စကားပြော​သင်​တန်း … စ​တာ​တွေ။
မေးမြန်း​ချက်… အောင်မြင်​မှု ဘယ်​မှာ​လဲ။ ???
doremi | Education, Life Style | 2013年12月5日
Written by ထက်ကျော်
ဒါ​ကြောင့် ဒီ​နေ့ လူ​ငယ်​တွေ​ကို အိပ်မက်​တွေ​များ⁠များ​မက် စေ​ချင်​တယ်။ ကြီးမား​တဲ့ ရည်​ရွယ်​ချက်​တွေ၊ မျှော်​မှန်း​ချက်​တွေ​ကို ထင်​ဟပ်​စေ​မယ့် အိပ်မက်​မျိုး​တွေ ကို မက်​စေ​ချင်​တယ်။ လှပ​တဲ့ အနာဂတ်​ရဲ့ နိမိတ်​ပုံ​တွေ​နဲ့ ထုံ မွှမ်း​နေ​တဲ့ အိပ်မက်​မျိုး​တွေ​ကို မက် စေ​ချင်​တယ်။ စိတ်ကူး​နဲ့ လက်တွေ့​ဘဝ​ကို အနီး​စပ်​ဆုံး တစ်​ထပ်​တည်း ဖြစ်လာ​နိုင်​လောက်​တဲ့ အိပ်မက်​တွေ​ကို မက်​စေ​ချင်​တယ်။ အိပ်မက် မက်​တယ်​ဆို​တာ ပိုက်ဆံ​တစ်​ပြား​မှ ကုန်​စရာ မ​လို​သ​လို လိုင်စင်​တွေ၊ ဘာ​တွေ​လည်း မ​လို​ဘူး။ သူတောင်းစား​က လည်း သမ္မတ​အိပ်မက်​ကို မက်​နိုင်​ပါ​တယ်။ အလုပ်​လက်​မဲ့​တစ်​ဦး​က​လည်း ဘီ​လျံ​နာ​အိပ်မက်​ကို​မက်​ခွင့်​ရှိ​ပါ​တယ်။ ဘယ်​သူမ​ဆို လွတ် လွတ်လပ်​လပ် အိပ်မက် မက်​နိုင် ခွင့် ရှိ​ကြ​ပါ​တယ်။
ကမ္ဘာ့​ခေါင်းဆောင်​တို့​ထဲ အဆင်း​ရဲ​ဆုံး သမ္မတ​ကြီး
doremi | Education | 2013年11月24日
Written by မောင်​လွင်​မွန် (က​သာ)
လွတ်လပ်​ပေါ့ပါး​စွာ နေထိုင်​သော ဥ​ရု​ဂွေး​သမ္မတ​ကြီး ဂျို​ဆေး​မူ​ဖီ​ကာ
တောင်​အမေ​ရိ​ကတိုက်​၏ အရှေ့တောင်​ဘက်၊ အာ​ဂျင်​တီး​နား​နှင့် ဘ​ရာ​ဇီး​နိုင်ငံ​တို့​အကြား​၌ မြန်မာ​ဘော​လုံး​ပရိသတ်​တို့​နှင့် မ​စိမ်း​လှ​သော နိုင်ငံ​တစ်​ခု​ရှိ​သည်။ ဗိုလ်​သံပေါက်​အောင် ခေါ်​လို​သူ​တချို့​က ‘ယူ​ရူ​ဂွိုင်း’ဟု ခေါ်​တတ်သော်​လည်း အသံ​ထွက် အမှန်​က’ဥ​ရု​ဂွိုင်း’ ဖြစ်​ပြီး မြန်မာ​အသံ​ထွက် ‘ဥ​ရု​ဂွေး’ နှင့် အတော်​နီးစပ်​ပါ​သည်။ ယင်း​နိုင်ငံ​တွင် ၂​၀​၁​၀ မှ ၂​၀​၁​၅ သမ္မတ​သက်​တမ်း​အတွက် ၂​၀⁠၀​၉ ခု နိုဝင်ဘာ ၃​၀ ရက်​၌ ရွေး​ကောက်​ပွဲ​အနိုင်​ရ သမ္မတ​မှာ José Mujica ဖြစ်​သည်။ သူ့​အမည်​ကို ဂျို့စ်​မူ​ဂျီ​ကာ​ဟု အသံ​ထွက် ခေါ်​မိ​နိုင်သော်​လည်း နိုင်ငံ​တကာ​တွင် အများ​သိ အမည်​မှန်​မှာ ‘ဂျို​ဆေး​မူ​ဖီ​ကာ’ ဖြစ်​ကာ သူ့​နိုင်ငံသား​များ​က ‘ဂျို​ဆေး​ဖူ​ဖီ​ကာ’ဟု စ​ပိန်​အသံ​ထွက်​ဖြင့် ခေါ်​သည်​ကတော့ ပို​မှန်​လိမ့်​မည် ထင်​သည်။
doremi | Education | 2013年11月22日
Written by မောင်​ကြည်
ကျွန်တော်​တို့ ငယ်⁠ငယ်​တုန်း​က သင်​ခဲ့​ရ​သည့် ပုံပြင်​တစ်​ပုဒ် ရှိ​ပါ​သည်။ အဘိုး​အို တစ်​ယောက်​က ပျိုး​ပင်ပေါက်​လေး​တွေ​ကို စိုက်ပျိုး​နေ​သည်။ နန်းတော်​ထဲ​မှ တောကစား ထွက်​လာ​သည့် မင်းသား​လေး တစ်ပါး​က အဘိုး​အို​ကို မြင်​သွား​သော​အခါ မြင်းပေါ်​မှ ဆင်း​ကာ “အဘိုး ဘာ​တွေ​စိုက်​နေ​တာ​လဲ” ဟု မေး​လေ​သည်။ အဘိုး​အို​က “ပျိုး​ပင်​လေး​တွေ စိုက်​နေ​တာ​ပါ” ဟု ပြန်​ဖြေ​သည်။
“အဘိုး​ရယ် ဒီ​အပင်​တွေ ကြီး​လာ​တဲ့​အထိ အဘိုး​အသက်​ရှည် နိုင်​ပါ့​မ​လား။”
“အဘိုး​က ဒီ​အပင်​တွေ​ကို အဘိုး​အတွက် စိုက်​နေ​တာ မဟုတ်​ပါ​ဘူး။ နောင်​လာ နောက်​သား​တွေ​အတွက် စိုက်​နေ​တာ​ပါ” နောင်​မျိုး​ဆက်​တွေ အရိပ်ခို​ဖို့ အသီး​စား​ဖို့ ရည်​ရွယ်​ချက်​ဖြင့် အနာဂတ်​ကို မျှော်တွေး​ကာ အဘိုး​အို​က ထို​ကဲ့သို့ ပြန်​ဖြေ​လိုက်​ခြင်း ဖြစ်​ပါ​သည်။ အဘိုး​အို​ရဲ့ ခေါင်း​ထဲ​မှာ မနက်​ဖြန်​ဆို​တဲ့ အတွေး​တစ်​ခု ရှိ​နေ​ပုံ​ပါ​ပဲ။
doremi | Education | 2013年11月18日
Written by ILBC တင်​မောင်​ဝင်း
ပညာ​ရေး​သည် ဘဝ​အတွက် ပြင်ဆင်​ခြင်း၊ လေ့ကျင့်​ခြင်း ဖြစ်​စဉ် ဖြစ်​သည်။ တစ်​နည်း​ဆိုသော် ကျန်းမာ​စွာ ချမ်းသာ​စွာ နေ​နိုင်​စေ​ရန် ငယ်ရွယ်​စဉ်​က​ပင် ကြိုတင် လေ့ကျင့်​ပြင်ဆင်​ခြင်း ဖြစ်​သည်။ ကျန်းမာ​စွာ နေထိုင်​ခြင်း​ကို လူ​တိုင်း သိ​ပြီး​ဖြစ်​ပြီး ချမ်းသာ​စွာ နေထိုင်​ခြင်း ဆို​သည်မှာ အသက်​ရှင်​ရ​သော နေ့​တိုင်း စိတ်​ချမ်းသာ​မှု​နှင့် အေးချမ်း​စွာ နေ​ရ​ခြင်း​ကို ဆိုလို​ရင်း ဖြစ်​သည်။ ကလေး​တစ်​ယောက် ကျန်း​ကျန်းမာ​မာ​နှင့် စိတ်​ချမ်းသာ အေးချမ်း​စွာ နေထိုင်​နိုင်​ရေး​အတွက် လေ့ကျင့်​ပေး​ရာ​တွင် တစ်​ဦး​ကောင်း​တစ်​ယောက် ဆောင်ရွက်​လျှင် အောင်မြင်​မှု မ​ရ​နိုင်။ ထို​ကလေး​၏ မိဘ၊ ထို​ကလေး​အား လေ့ကျင့်​ပေး​မည့် ဆရာ​နှင့် ထို​ကလေး ကိုယ်တိုင်​ပါ လုပ်ကိုင်​ဆောင်ရွက် လေ့ကျင့်​နိုင်​ပါ​မှ လေ့ကျင့်​မှု​မှ ရလဒ်​ကောင်း ရ​နိုင်​မည်။
2039 total views,2today
Written by မောင်​တင်​ဦး (မြောင်း​မြ)
စာ​ဖတ်​မှ အသိ​ဥာဏ် တိုးတက်​မယ်။ စာ​ဖတ်​မှ ဗ​ဟု​သုတ​ပွား​မယ်။ ဒါ​ကြောင့် စာ​ဖတ်​ကြ​ပါ​လို့ သူ​က​ပြော၊ ကိုယ်​က​ပြော၊ ခပ်​လွယ်⁠လွယ်​လေး လမ်း​ညွှန်​တတ်​ကြ​ပါ​တယ်။ အလိမ္မာ စာ​မှာ​ရှိ​လို့ မြန်မာ​စကားပုံ​က ဆို ပါ​တယ်။ ပညာ​ရွှေ​အိုး လူ​မ​ခိုး​လို့​လည်း ဆို​ကြ​ပါ​သေး​တယ်။ဒီ​လို​သာ ပြော​ကြ၊ ဟော​ကြ​ပေ​မယ့် လက်တွေ့​မှာ စာ​ဖတ်​နှုန်း၊ စာတတ်​နှုန်း အနိမ့်​ဆုံး​က မြန်မာ​ပြည် ဖြစ်​နေ​တာ လက်တွေ့​ပါ။ ကျောင်း​ပညာ​ရေး အဆင့်​အတန်း​က​လည်း ထို့​အတူ​ပါ​ပဲ။ အားရ​စရာ​မ​ရှိ​လှ​ပါ။ ထို့​အတူ မ​လိမ္မာ​တဲ့​သူ​တွေ များ​နေ​တာ​ဟာ စာမ​ဖတ်​ကြ​လို့ စာမ​ဖတ်​တတ်​ကြ​လို့​ဆို​တာ ထင်ရှား​နေ​ပါ​တယ်။
ဘီ⁠ဘီ​စီ သ​တင်း​ပညာ ကော​လိပ်
doremi | Education | 2013年11月15日
ဒီ​စာ​မျက်​မှာ​တွေပေါ်​မှာ သ​တင်း​လိုက်​နည်း၊ သ​တင်း​ရေးသား​နည်း၊ ဘာသာ​ပြန်​နည်း၊ တင်ပြ​ပုံ၊ စကားလုံး အသုံး​အနှုန်း စ​တဲ့ သ​တင်း​သမား​တွေ အတွက် သိ​သင့်​သိ​ထိုက်​တဲ့ ပညာ​ရပ်​တွေ​ကို ဝေမျှ​ပေး​ဖို့ ရည်​ရွယ်​ပါ​တယ်။
Zoom A3 (Accoustic Multi-effect DI) (6 views)
ကို​စိုင်း (အခြေ​ခံ​ဂစ်​တာ​တီး​ခတ်​နည်း) (4 views)
T.C Electronic G Natural( Accoustic Multi Effect) (3 views)
Epiphone Dr-100 Natural (2 views)
Hello kitty (2 views)
Washburn (2 views)
Mavis ( Produce by Ishibashi Music Coporation) (2 views)
Alphard (1 views)
Zoom g3 multi-effect (197088 views)
Zoom A3 (Accoustic Multi-effect DI) (161345 views)
T.C Electronic G Natural( Accoustic Multi Effect) (160805 views)
Epiphone DR-100 Sunburst (159360 views)
Lexus ＧＳ　Year 2006 March Model (137075 views)
Eleven Rack guitar/audio interface (132691 views)
LAG Guitars (T66DCE) (132526 views)
DoremiCafe (132480 views)
Boss AD-8 (Acoustic Guitar Processor) (131021 views)
BOSS GT-100 (126225 views)
© 2019 Doremi Shopping. All Rights Reserved.